Martijn van Staveren, Boka Simba Simba uye kuratidzirwa kunoonekwa naMartin Vrijland: Martin Vrijland
Martijn van Staveren, Boka Simba uye kugadziriswa kunoonekwa naMartin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 29 June 2017	• 28 Comments
Martijn van Staveren nyeredzi inokura mune zveMweya Netherlands?
Chii chinonzi matrix uye nei zvichibatsira kuona kuburikidza nayo?
Makore mangani emapurogiramu angave akashandura chokwadi chenyu
Chimiro chenyu chenyika chakarurama here?
Zvisarudzo zvekusarudzwa kunonzi 'democracy': VVD 33 seats
Tags: Arjan Bos, ratification, ratifications, Boka Guru, Nyika Nyaya, Featured, hypnosis, Martijn van Staveren
29 June 2017 pa 12: 01
Simba rezvisikwa naMartijn van Staveren
Mashoko anonyangadza ekunyengetedza hypnosis kubva panguva yekutanga
29 June 2017 pa 13: 26
Izvi zvinotyisawo kuti vose vaGalactic pamberi pevarume muNetherlands vane 5000 Facebook shamwari. Martijn van Staveren 5000, Maarten Horst 5000, Frans Heslinga 5000 ... vaizoendeswa muna 1x kubva kune shamwari dzedu dzeAIVD?
PaMaarten naFrans nhamba idzi dzakagadziriswa zvishoma pasi, asi mwedzi mishomanana yapfuura dzaive chaizvo paZ5000 (Ndakanga ndava kutaura pamusoro pazvo)
30 June 2017 pa 20: 58
5000 Shamwari ndeyepamusoro iyo Facebook inobvumira munhu mumwe nomumwe. Kana iwe uchida zvimwe, unofanirwa kuumba peji. Saka hazvina kuitika kana mumwe munhu ane 5000 shamwari.
29 June 2017 pa 16: 52
Mune 2 hafu yezana remakore re19, White Rose yakatanga kutaurwa sechiratidzo cheMusununguko Wakazara. Iyo inoratidzira nguva dzose inoratidzwa ne 5 maruva emakumbo akaparadzaniswa ne5 sepals. Mufananidzo wenguva dzose 5 angle uye 5 yakaratidza nyeredzi, chiratidzo chekunaka kwakakwana.
Freemasons vanozvishongedza pachavo pamutambo waSt. John ne White Rose. Pamusoro pekubwinya kwakachena tinorara pasi pasi peChNUMX White Roses kuti tiyeuke avo vose vakarasika midziyo yavo yepasi. De Witte Roos sechiratidzo chekuchena nekunyarara, asi pamusoro pezvose sechiratidzo chechiedza chakachena cheMukuru Architect weChenyika.
Mutsika izvi zvinoitwa mukutevedzera 1e mambo uyo akavasunungurira chiKristu muUmambo hweRoma, kureva Constantine Mukuru, uyo aiva chena akamuka sezvo inokosha mupiro akaita iyoyo Bishop veRoma, Papa saka.
2 July 2017 pa 23: 36
Mashoko ane mvere ...? Icho chiri nyore
, inoyeuchidza zvakawanda nezvemufundisi asingazivi kuti aripi? zvakanaka nokuda kwekuparidza, kusatenda mukutenda kana kutenda kwekusatenda? Izwi rakakosha pamusoro pemakrofoni haicharevizve zvakanyanya kune vateereri (kuteerera nzeve)
Mutungamiri van Staveren haufaniri kutora mashoko mumharidzo yake asi mumweya wehupenyu hwake, ngaaimumire pamwe naMik Kat, Musikana Niburu (Alexandra) uye Joost Niemullerr-Brrrr ...
29 June 2017 pa 13: 43
Martijn van Staveren anosangana naJesu (achitaura nezvemhumhi mumapfeke emakwai):
29 June 2017 pa 14: 33
Kunyanya huwandu iyi inoparadzirwa kuburikidza ne WantToKnow (Guido Jonkers, uyewo musangano wehurukuro dzaMartijn van Staveren):
29 June 2017 pa 15: 24
Kunyange vatorwa vanoona kuti zvitendero zvose zvinogona kuwirirana (haufaniri kurega chitendero chenyu chazvino) ... iwe unotofanira kukwidziridza iwe uye uve nerudo.
Onai shots mutsva kubva muvhidhiyo umo zvitendero zvenyika yose zvinomira pamwechete. Inonzwika sechinhu chinouya zvakananga kunze kwebhokisi raLuciferianism (Vatican, aristocracy, masangano akavanzika, kana Farao ropalines). Ona pano nokuda kwetsanangudzo yangu:
jana akanyora kuti:
29 June 2017 pa 19: 29
Hi Martin, zvirokwazvo, ndinofara kuti iwe wakateerera izvi, ndaitya kuti ndini ndoga wakanzwa kuti izvi hazvina kunaka. Zvinosuruvarisa, handigone kupa uchapupu hwazvo, chete kuti ndinogona kugara ndichinzwa zvakanaka kana mumwe munhu achitaura chokwadi kana kwete. Ndakakurumidza kunzwa kuti akanga asiri chaiye, uye ndaifunga kuti zvakanga zvakashata zvikuru kuti munhu wose arimo. Iwe uri mutori wenhau, tarisiro iwe unoramba uchiongorora zvinhu zvakadai. Ndinokutendai!
29 June 2017 pa 19: 30
mmm, chikwata cheFranudian; the wariness ... ;-)
adje akanyora kuti:
30 June 2017 pa 02: 24
Inouya zvakananga kubva kumba kwaRucis Trust Martijn. Pure Theosophy.
30 June 2017 pa 07: 29
Ndinotenda kuti semunhu iwe unogona kuva ne "zviitiko zvekare", asi iwe unofanira kugara uchiyeuka kuti (kubva pane zvinyorwa zvangu zvekushandisa kombiyuta) kuonekwa kwakadaro kunogona "kuiswa mukutamba". Ngatione iyo (kuti iite nyore) asi izvo 'masangano emadhimoni'. Ndinoshandisa kushandisa izwi rokuti 'Luciferian intervention'. Ndinoziva vanhu vashoma vanoti vanoona vatorwa muupenyu hwavo. Ndinofungidzira kuti ivo vakatendeseka, asi mhinduro yangu kune aya maitiro ndeokuti: funga nezvesimba ra Luciferian field. Kungofanana nemuumbi wekufananidza anogona 'kuisa' chero chinhu chipi nechipi chaidiwa mumutambo, saka ndiye anogona kuvaka iyi matrix Luciferian.
Kune vanhu vanotaura kuti Arjan Bos akasiya basa rake uye iye zvino ari kurarama pane zvishoma ... Ndinogara ndichingwarira pakarepo ndichitenda kune mumwe munhu anotaura. Ndakaona muupenyu hwangu kuti haugoni kutenda munhu pane zvaanotaura. Mune dzimwe nhepfenyuro dzenyika, vashoma vashamisi vakangwara vari kufamba-famba avo vangangodaro vasina kuratidza shure kwemirimi yavo. Funga nezveAIVD kushanda minda. Ndinenge ndichiri kungwarira, kunyange kana mumwe munhu achizviti kuva shamwari. Vamwe vanhu vangave vari makore 20 shamwari yako uye chete ipapo unhu hwavo hwechokwadi hunova pachena. Zvakare: Nzira yakanakisisa yekudzora kushorwa ndeyokutungamira iwe pachako. Pamwe, ndinofunga kuti Arjan naMartijn vari kubudisa chikwata chavo ne "Crowd Power" uye 'kuratidzira' mafirimu.
Ini pachangu ndinonzwa kuti Martijn Van Staveren chokwadi zvikuru hwakakanyiwa desinfo uye ndakacherechedza kuti iye Arjan Bos kazhinji kuti zvinobatsira kuti nyaya yangu vanoshandisa (uye zvikuru kuwana) ne nyaya I vakurukure overwrite PAVANHU VAZHINJI Power mafirimu. Izvozvo ndezvokwadi kwazvo ... kana kunatswa. Sarudza uye sarudza. Nenzira iyo, ndinoona iine ngozi, nokuti vaverengi vangu vane mavhidhiyo eVanhu Vane simba vanotumirwa musango, ini ndichiita zvandinogona kuti ndicheke musango ndoita kuti chinetso chacho chinzwisiswe. Muchidimbu: Martijn naArjan, mune maonero angu, vanogadzira jungle rekushaya simba (nekubatanidza zvinhu zvose kune imwe nyaya yechihedheni).
Mukufunga kwangu, Martijn haasi kuedzawo kukurudzira vanhu kuti vaise pachena matrix, nokuti anovaisa panzira dzenhema uye anoisa tariro yeGalaxtical kutsigirwa (yaanova mutauriri). Kuti uzarure matrix, haufaniri kuisa mufananidzo wenhema / asina kururama weiyo matrix. Ndinowana ruzivo rwenhema runofambidzana nekunyengera kwaLuciferian; Muchidimbu: kuchengetedzwa kwemambure.
Nzira dzekunyengedza muhutano hwaanoshandisa ndezvekuti, mune maonero angu, nemafungiro akafanana nekumutswa kwekunyengera kwekuzadzikiswa nemweya mutsvene muChechi yePentekosta; inopa manzwiro akanaka, asiwo Luciferian desinfo. Iwe haugutsiri chinhu. Iwe unongotanga kunyengera kwekupa simba. Iwe unova nesimba pakusimuka munyika chaiyo, kubudisa pachena nhema, kutaura chokwadi uye kuona kuti uri mweya une simba. Iwe haufaniri kutora kunze chero matanho emasimba iwayo. Iwe uri mweya une simba; kusingafi nekugadzira. Tinoda varwi uye kwete mhando dzisinganzwisisiki dzinoedza kunzwa manzwiro ane ruoko rwavo pamwoyo uye nokutamba mumatrice. Naizvozvo tinofanira kufanudzira nekubudisa pachena vashandi vaLucifer. Izvo ndizvo zvandinoita uye ndizvo zvandinorevawo kuna Martijn naArjan (vamiririri mune dzimwe nyika nhepfenyuro / kuchengetedza mambure). Ndokusaka ndichitaura kune vanochengeta magedhi aya: aristocracy; iyo piramidi yezvigadziro zvesimba masimba umo mahedheni, Rome uye masangano akavanzika anoita basa rinokosha.
Iwe unofanirwa kutsanangura matrix nenzira yakarurama. Chikamu chemashoko aya ndiwo mhedzisiro yekunze kuchengetedzwa kwemiti. Tsanangudzo yakajeka yematrikisi ndeyekuti, sezvo ini ndiri hanya, chokwadi chinopisa moto (chimiro chedu che3D) umo Lucifer anochengetedza mweya yedu kubatwa. Vatorwa varipo ndezvemadhimoni ayo tinotiwo Annunaki, Archonten, jinns, nezvimwewo. Vanokunyengedza nehupo (uye dzimwe nguva kunyange "kuratidzika") yemarudzi akasiyana-siyana. Iwe unogona kuisa mune zvose mumashandisi emakombiyuta. Ikutarisa pane zvenhema marongerwo agenda (Lucifer akafananidza marudzi akasiyana-siyana) ndezvakaipa. Tinofanira kutarisa pamusoro pevaki uye kutonga kwechirwere ichi: Lucifer. Tinofanira kubudisa pachena uye kubvisa matrix iyoyo.
Izvo zvose zvakajeka kutsanangura uye kutsanangura. Ndakatarisa kuenderera mberi nemavhidhiyo emagetsi emagetsi echitsika nhanho uye ndichipa kuongororwa kwangu, asi my internet bandwidth ikozvino yakanyanya kwazvo mu caravan. Zvichida ndichaita izvozvo zvakare, nokuti ndinofunga kuti zvakakosha kuratidza kuti hazvina kunyatsozivikanwa. Izvo zvingave zvichiri kuitika.
Nokuti nguva iripo, ndinosarudza kuisa pfungwa pangu pachedu ... chero bedzi pandinoona kuti vanoshaiwa vevarume vanobatazve vaverengi vakawanda.
Verenga nyaya ino kuitira kunzwisisa kwakanakisisa:
ubongo akanyora kuti:
30 June 2017 pa 15: 18
Mukufunga kwangu iwe unofunga nezvemaitiro evanhu vaviri. Achishandisa maitiro ehutachiona naMilton Erickson, Nlp
vatendi vazhinji vakatungamirirwa. Chinhu chakaipa. Handizoshamiswa kana vose vatendi vachiita basa rekuchenjera, ini handiti zita racho.
Zvakapfuurira mberi, ndinoona kuti vose vatendi vane bhaibheri. Iwe unozviona kune vanhu vakawanda mune imwe nzira 'mhizha'. Izvi hazvisi mungozi.
2 July 2017 pa 01: 20
Izvozvo Martijn anoita kuti asunge vanhu ndezvizvi: Anounza 'zivo' yake uye zviitiko se "chokwadi", zvaanoona zvake zvisingakwanisi uye zvisingakwanisi kuparadzwa. Anoisa hupenyu hwako zviitiko maererano nezvo: zviitiko zvako zvinobva mumatrice, saka nhema. Iwe unofanirwa kutendeuka, iwe uri mutadzi, sezviri mumachechi. Anokuparadzanisa iwe mumharidzo dzake, uye kuburikidza nezvo izvo zvinodanwa kubvumirwa iwe unogamuchira chipo kubva kwaari. Iwe "wakadzikinurwa" kubva pazvivi zvako. Iwe uchagamuchira mufaro nekuvandudzwa kwekunzwisisa.
Mukuwedzera, anonyatsoparidza shoko: isu tiri mumwe, kana kuti zvose ndeye, uye umwe ndiwe. Vateereri vake vari kugadzirira nguva inouya yeruponeso uye vanogona kukurukurirana pamwe chete mukati meApri. Akaparidzirawo Kristu simba. Zvinyatsojekesa Theosophy kana Luciferianism.
2 July 2017 pa 07: 25
Totally agree. Anotaurawo kuti iwe unofanira kuenda kuburikidza nekutya kwako; izvo zvinotyisa, sezvakange zvakaita, chirongwa chinodiwa. Iye pachake akapfuura nemamwe vatorwa nekuda kwekutya kwekubviswa kwake. Izvo zvaanokudzidzisa iwe zvinotanga kusvika kune archontonic / masimba emadhimoni ayo anorondedzera (uye anozviona pachake) sekunze (nokuti vanozviratidza kwaari).
Nokudaro anoparadzira kutya uye nguva yeruponeso inobatsira zvishomanana pokuti iwe unosangana sei nekuziva kwako. Iwe unofanirwa kupfurikidza nekutya ikoko nokuda kweizvozvo. Siya iyo yose. Kolder! Uye ine ngozi zvikuru. Lucis Trust angangodaro akafara zvikuru naMartijn.
Zvandinoona zvakashata ndezvokuti Martijn van Staveren, Guido Jonkers naArjan Bos vave nemakore akawanda vakapamba nyaya dzakakomba uye vanhu vane ruzivo rwekusaziva vanobva vaenda sewebsite seyangu. Izvi zvinoitwa nekutora mashoko ekupedzisira uye nekuenzanisa naRucis Trust (United Nations) Luciferian Theosophical Mishmash. Handikwanisi kufungidzira kuti hakuna hune masimba anoshanda shure kweizvi. In yangu maonero, Guido Jonkers chokurukisa (mutsivi Marcel Brass) mune humwewo nevezvenhau vari AIVD tsvimbo uye Arjan Bos uye Martijn Van Staveren akadzidzira kudurura maturo ichi kuburikidza kwavo nemazvo NLP uye hypnosis zvakapesana vanhu. John Consemulder zvakare munyengeri anokosha.
Cherechedza kuti iwe unogona kuwana sunflower uye chiratidzo chekuvha kwose kwese nevatendi. Itazuva rinoratidza chiratidzo chaLuciferianism (Saturn matrix). ichi nokuti sunflower zvinoreva yakare renyeredzi pamwe Saturn, Venus uye Mars vakanga kunangiswa uye plasma zvinoyerera akapa sunflower kwepasi kudenga (ona "zviratidzo womutorwa denga 'of Vokutinhira Vasingatyi Porject musi YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=t7EAlTcZFwY).
2 July 2017 pa 07: 38
Uyezve, unofanira kuzvibvunza zvakadaro kana uchifarira kuti mafirimu mhando iyi sezvo pazasi kuona kana vanhu zvechokwadi vasingachakwanisi kuchenesa kunze "mupfumi kufungidzira nyaya: Hachisi pachena kuti ichi Arjan Bos achangobva tega nyaya kuti pamusoro zvokunamata . Uyai! Makambani ekutengeserana kuti awane ET kuregeresa mari yekuregeresa mari. Mukai vanhu! Bindu kwete mumusungo wevanyengeri ava.
2 July 2017 pa 08: 07
Mumwe munhu akafanana naArjan Bos, uyo akabatanidzwa mune dzimwe nhau, anofanirwa kuziva kuti ari kuita chiratidzo che 666 pano? Kana kuti anongova chinyaradzo chisina mhosva / chinyararire here?
2 July 2017 pa 07: 51
Uye hongu pane peji (pasi nechokurudyi) tinoona zvakajeka Martijn's Lucis Trust Theosophy maonero. "Zvitendero zvose zvine chokwadi; zvirokwazvo ivo vose vanonamata mwari mumwechete ... "Unoziva here mwari uyu? Lucifer; mwari wematrice aya. Vane deinfo yaMartijn vanokupa iwe usingazivikanwi mune dzidziso dzaLucis Trust (yaimbova Lucifers Trust) yeUnited Nations mu:
10 July 2017 pa 20: 12
Hongu, ndizvo zvandinoreva. Bvisa Lucis Trust (Theosophy)
Iko kune thumb thump kumusoro.
Zvichida anogona kutamba Maitrea mune ramangwana ... ????
BartSch akanyora kuti:
30 June 2017 pa 13: 41
Zvakashata kuti kubvunzurudzwa uku hakusi kuuya, ndaida kuziva nezvazvo.
30 June 2017 pa 18: 23
Hungu, ndinofungawo zvakare! Asi iwe waiziva here kuti anopedzisa nayo zvakare? rega webhusaiti yake nezvose zviri munzvimbo ino? Akazviti pachake nokuti haana chaanoda kutaura. Ini ndinofunga kuti hi iri ikozvino mukati uye ikozvino kwegore chaizvoizvo inoda kuchengeta sabbatical.
30 June 2017 pa 19: 08
Iniwo ndinofunga kuti mabhegi aya akanyatsozadzwa. Zvinoshamisa kuti chiziviso ichi chakauya mushure memwedzi mushure mokutanga kwenyaya yangu ...
30 June 2017 pa 21: 13
Ndiri kufarawo nekuona kwakanyanya kwezvinhu zvake. Wakaenda kumisangano yose ndokuona masimba evanhu. Chimwe chakandirova ndechokuti mushure mezvose zvese izvi ini ndichiri nechinetso kutamisa nyaya yacho nyore nyore kune mumwe munhu. Izvo chaizvoizvo nokuda kwekutaura kwemaolicly iyo iwe unorasikirwa ne thread.
Uye izvo zvandinofungidzira zvakare ndeyekuti anoti shure kwekufa haufaniri kuenda kuchiedza, nokuti ichocho ndechechokwadi. Ndinowana izvi zvinopesana nemanzwiro angu.
Uye ini ndiri kushamiswa nekushaiwa kwekutsoropodza. Vanhu vose vanochida.
Ukuwo rumwe rutivi, handina ruzivo rwekuti Martijn musha wemari. Kunyanya avo vakaronga vanofanirwa nemitauro uye Masimba Evanhu vose vakasununguka paYouTube. Izvo zvaanomira iye zvino zvinoratidza zvakare. Handifungi kuti angave ari mukati. Haana kubatikana kwenguva refu.
30 June 2017 pa 22: 16
Ndakanga ndakaitawo kuverenga. Zvirongwa zvekupedzisira zvaakaita musango uye iwe waifanira kuuya nezvokudya zvako pachako. Nokuti iwe waifanira kuisa pasi 25 eu, kwemaawa eSun 3. Ndizvo zvakaitwa nevanhu 130. kungoverenga 130x 25 eu uye kuti 2 x pavhiki. Saka ndiyo 6000 pavhiki.
Uye ndinofara kuti handizi ndoga uyo asingadi mutauro iwoyo. Uye chii chaMartin pamusoro pekunyengedzwa ikoko, handina kunetseka, asi ndinonzwisisa zvaanoreva. Ndiri nechewo rutivi uye nechemberi mitsara uye yese iyo shiri inofanana neiyi uye nguva dzenguva dzinokurumidza kukanganiswa tsvimbo uye ndinofunga kuti iyo ndiyo inangwa. Yakava ibracadabra yakadaro zvokuti hakuna munhu anotya kuzarura muromo wake, achitya kuti haasi mune mafungiro akanaka. Ndinoti, izvi ndezvi: zvipfeko zvenyaya yamambo.
Hapana munhu anotya kutaura kuti ari kutenderera nenzira yake, nenzira ye.
30 June 2017 pa 22: 25
Ndinofunga kuti matrix haisi yakaoma kunzwisisa. Ini ndinotsanangura nyaya idzi pano panzvimbo iyi mune zvinyorwa zvisinganzwisisiki uye zvinonzwisisika. Icho chinhu chiri nyore kunzwisisa uye hachidi kuti tsanangudzo mumitauro inokupa iwe gomo rezivo (zvikamu zvechokwadi zvakasanganiswa nemanyepo emanyepo) kuti miti yemutorwa haisati yaona musango waLuciferi uye ichirasikirwa.
Nokudaro zvinoratidzika zvinangwa zvakanaka zvinokuisa iwe nenzira isina kururama shure kwaizvozvo iwe unopera simba.
Izvo zvinonzi zvinotsigirwa zvinouyisa kunyengera kuti iwe unogona kuchinja chimwe chinhu pamusoro pezvakangoita izvozvi (soul / prison prison), asi iyo ndiyo pfungwa isina kururama. Sezvo mutambi wemutambo haufaniri kuedza kuchinja mutambo. Pane zvinopesana, iwe unofanira kungoziva kuti mweya wako unopindirana neyake yepakutanga. Hongu, Martijn akachenjerawo kugamuchira mashoko iwayo, asi anokandawo izvozvo mumutorwa ari mutorwa.
Zvose zvatinofanira kuita ndeyokuziva kuti tiri ani. Kanda nyaya dzose dzisingazivikanwi, marudzi emamwe marudzi uye Galaxtic Federations pamusoro pekugadzira. Izvi ndezvechokwadi kutenderera mumweya. Iwe unorasikirwa mukati maro uye unova usina tariro.
Iwe haufaniri kufungisisa kana kutanga chimwe chinhu chekuita. Kuona chete kuburikidza nematrix uye kuziva kuti uri mweya usingaperi usingafi (unobatanidzwa kune yako yepakutanga) ndizvo zvaunofanira kuita. Kuziva izvozvo kunonzi 'kuve kuziva' uye kubva pane izvozvi unoziva iwe uchaona kuburikidza nezvinhu zvose muhupenyu hwakaita semwana uye kuona nzira yekubuda nayo.
Kubva pane 'chizivo' ichocho iwe unongotanga kuisa chiedza pachiri ichocho uye kuratidza vanhu kuti vanogara muTurumanshow.
1 July 2017 pa 08: 21
1 July 2017 pa 09: 46
Zvakanaka Martin, ndizvo zvandinonzwa. Iwe hauna hanya nenyaya dzose dzakapoteredza. Zvose zvinokanganisa. Uye ini handina kuuya neshoko rokuti rudo munyaya yake kunyange zvazvo ndisina kuverenga kana kuteerera kune zvose, asi rave rive urombo husina rudo nenyaya. Ndinokutendai zvakare nokuda kwekutora girafu. Ndiri kuverenga shanduro yako nyore nyore!
1 July 2017 pa 10: 04
Iyo matrix umo patinozviwana pachedu mweya yedu yakabatwa nayo inogona kuwanikwawo muGnostics, ona bhaibheri reGnostic.
Maererano neGnostics, mweya yedu inobatwa naSatani, kufanana. Pano pane / vaiva Gnostics vanotenda kuti satani / mutsara uyu, Testamente Yekare, Mwari Yahweh.
« Facebook censorship zvinyorwa zvinyorwa pamusoro pemuMacavelli
'Desinfo agents & vatorwa' VERSUS 'inoratidza matambudziko chaiwo munyika uye vauye kuzoita' »
Total Visits: 16.186.560
Inosungirwa yekudzivirira chirongwa cheNetherlands Zvita 2019 yakaratidzwa
Patricia van Oosten op Inosungirwa yekudzivirira chirongwa cheNetherlands Zvita 2019 yakaratidzwa
Paul Somers op Chiitiko 201 corona hutachiona kurovedza mavhiki matanhatu pamberi paWuhan kusimuka, inofanidza kufanana mamiriro
Siep op Chiitiko 201 corona hutachiona kurovedza mavhiki matanhatu pamberi paWuhan kusimuka, inofanidza kufanana mamiriro